TOMATO "GULLIVER F1": SAWIR, SHARAXAAD KA DUWAN NOOCYADA KALA DUWAN IYO ASTAAMAHA - NOOCYO YAANYO
Tomato "Gulliver F1" - Hore u bislaaday, midho leh, noocyo kala duwan oo adag
Tomato "Gulliver F1" - mid ka mid ah noocyo cusub oo ay soo saareen beeraha Ruushka. Inkasta oo ay tahay kacsanaan, tamaandhada waxaa lagu siiyaa caan ka mid ah beerta. Astaamaha iyo sifooyinka tayada sii kordhaya ee kala duwan ee noocaan ah ayaa loo tixgelin doonaa hoosta si ay u sameeyaan go'aan ku saabsan iyaga sii koraya ee beerahayaga.
Kala duwanaanta "Gulliver F1" waa noocyo hore u bislaaday, midho leh, noocyo kala duwan leh. Waxaa loogu talagalay beerista lagu koriyo ama dhulka furan.
Heerka baadiyaha waa 70 illaa 150 cm (halkii dheer). Tamaandhada "Gulliver" waxay leeyihiin qadar yar oo caleenta ah iyo buraash leh tiro badan oo ah miraha. Xogta ka timid hal baadiyaha oo leh daryeel ku habboon waxay noqon doontaa 3-4 kg. Marka koraan koriyo, dhererka baadiyaha u gaara ugu sareeya, iyo berrin bannaan ma horumarin badan.
Midhaha yaanyada "Gulliver F1" waxay leeyihiin qaabka cylindrical ("kareem"), casaan. Diirka yaanyo waa cufan, taas oo ku haboon gaadiidka iyo kaydinta muddada dheer.
Miisaanka 5-6 ee miraha waxaa lagu sameeyay qaabab kala duwan oo laga bilaabo 10 ilaa 12 cm Miisaanka mid kasta oo caan ah wuxuu ka kooban yahay 70 ilaa 100 g. Jidhku waa mid culus oo leh qadar yar oo abuur ah. Dhadhanka midhaha leh sababtoo ah heerka sonkorta sarreeya waa mid aad u fiican, yaanyo laftiisa waa udub. Dhadhanka tamaandhada koray berrin bannaan, si aad ah ayuu uga badan yahay aqalka dhirta lagu koriyo.
Ma taqaanaa? Yaanyo kala duwan oo casaan ah waxaa ku jira nafaqooyin ka badan kuwa jaalaha ah.
Faa'iidooyinka "Gulliver F1" waxaa ka mid ah:
aan qabyo ahayn;
iska caabin kedis ah.
Waxaa ka mid ah cilladaha loo aqoonsan karo baahida loo qabo in la xoqdo oo la xiro duurka, iyo astaamaha kale ma jiraan wax dhib ah.
Doorka muhiimka ah ee helitaanka dalag hagaagsan wuxuu leeyahay qoyaan sax ah: laga bilaabo abuurka abuurka, geedo beerto iyo soo afjarida qanjaruufo, dabacsan, waraabinta iyo xirashada. Qeexida marxaladaha ugu muhiimsan ee beerista yaanyada "Gulliver F1" waxay ka fikiraan hoos.
Wixii geedo beeray horraantii Maarso. Toobada yaanyo waa in loola dhaqmo xalka daciifka ah ee daloolka kalluunka iyo wakiilka antifungal, sababtoo ah dhammaan dadka wax soo saarka ma damaanad qaadaan ilaalinta rootida xididka iyo fungus.
Isku-darka isku-darka ah ee loo diyaariyey (isugeynta caadiga ah ee yaanyada) ayaa lagu shubay sanduuqyo loogu talagalay geedo, biyo la karkariyey oo loo oggol yahay inay istaagaan muddo. Seeds waxaa lagu beeray jeexjeexyada loo sameeyay si qoto dheer ah oo aan ka badnayn 2 cm, sanduuqyada waxaa lagu daboolaa weel iyo ku riday meel diirran oo diiran.
Ka dib markii miraha Gagaashan, sanduuqyada waxaa la dhigayaa windowsill leh iftiin wanaagsan. Waraabinta waxaa la sameeyaa toddobaadkii hal mar (haddii ciidda ay dhaqso u dhaqdo, malaha 5-6 maalmood oo kasta), waxaad isticmaali kartaa dhalada buufin. Iyada oo muuqaalka kore ee laba ama saddex mar hore hore ee geedka geedo u baahan yihiin si ay u dhasho. Geedo waxaa lagu fadhiisan karaa peat ama saxaro caag ah, halka jarida qaybta ugu muhiimsan ee lafdhabarta.
Waa muhiim! Diidmada ayaa kicinaysa horumarinta nidaam asaasi ah oo horumarineed, sidaas awgeedna wuxuu siinayaa awood dheeraad ah iyo koritaanka geedo.
Marka la gaaro da'da yaryar ee 50-55 maalmood, waxaa lagu beeray dhul furan. Miisaanka lagula talinayo inta u dhaxaysa duurka ee isku xigta waa 40 cm iyo 70 cm inta u dhaxaysa saf. Xayawaanka waa in marka hore la karkariyo Bacriminta dabiiciga ah ama fosfateerka.
Horumarinta yaanyada, "Gulliver F1" ma aha mid aad uga duwan noocyada kale ee Bisaylkiisa hore. Tamaandho waxay u baahan tahay quudin dheeraad ah, waxaa muhiim ah in la daboolo ciidda agagaarka afkoda oo si joogto ah uga saara haramaha si aanay u xirin xididada oo aan uruurin qoyaan xad dhaaf ah. Marka duurka u gaaro in ka badan 40 cm ee dhererka, waa in lagu xiraa iyadoo la isticmaalayo boogaha ama kor u kaca. Maaddaama kala duwanaanta noocani ay leedahay qaabdhismeed aad u jilicsan, waa inay noqotaa tallaabo.
Waa muhiim! Wixii yaanyo kala duwan "Gulliver F1" si wanaagsan ugu bixi 2 ama 3 afkoda.
Wixii Bisaylkiisa ka fiican ee miro, jaridda caleenta xad-dhaaf ah waxaa la sameeyaa: duurka u yihiin hawo ka badan oo ha u isticmaalin tamarta on caleenta.
Kala duwan yaanyo "Gulliver F1" waa wax u nugul cudurka, laakiin ka hortagga waa lagama maarmaan. Cudurka fungal iyo viral ma aha mid cabsi leh yaanyo, laakiin infekshanku waa suurtogal ah leh beerto aad u qaro weyn iyo joogitaanka caws. Sidaa darteed, waxaa lagu talinayaa in laga gooyo caleemaha xad-dhaafka ah iyo ka saar caws. Daahfurka dabiicigu maaha mid khatar ah, sababtoo ah kala duwanaanta hore ma laha waqti ay ku qaadato. Marka aphids ay muuqdaan, duurka waxaa lagu daaweeyaa biyo saabuun ah ama lagu buufin leh sunta cayayaanka gaarka ah.
Midhaha yaanyo "Gulliver F1" waxay ku habboon yihiin ilaalinta iyo habboonaanta cusub. Qaab dhismeedka cufan ee miro-dhiska iyo maqaarka adag ayaa u oggolaanaya in lagu jajabiyo pickles iyo marinade. Waa ku haboon tahay wax lagu karsado yaanyo, suugo, casiir dheer iyo ketchup. Sidoo kale waxaa loo isticmaalaa diyaarinta maraqyada, saladhyada iyo suufka. Mid ka mid ah noocyo yar oo in la qalajiyo oo la qalajiyo.
Ma taqaanaa? Inta badan yaanyada waxaa lagu koray Shiinaha - 16% waxtarka guud ee dunida.
Doorashada yaanyo "Gulliver F1", waxaad hubaal ka dhigan kartaa dhalid badan oo xasilloon. Kala duwanaanshuhu wuxuu u abuuray gaadiidka si fiican loo dulqaatay, muddo dheer lagu kaydiyo oo ku habboon ujeedooyin kala duwan. Haddii aadan dayacin talooyinka loogu talagalay tiknoolojiga saxda ah ee beeraha, natiijadu ma qaadan doonto muddo dheer si aad u sugto.